Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: March 2009
(၆၄) နှစ်မြောက်တော်လှန်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား(၂ )
Posted by yahutha at 3:31 PM0comments
64th FRtw23 tw23tinwin
Posted by yahutha at 3:57 PM0comments
မတ်လ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။
လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းစဉ် တပ်မတော်ကဲ့သို့ ပြန်လည်ဖြစ်လာစေရန် ရည်ညွန်းပြီး အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)မှ ဦးဆောင်၍ “အမှာင်လွှမ်းစေသောတပ်မတော်မှ ဂုဏ်ပြုထိုက်သောတပ်မတော်သို့” အမည်ရှိ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းခွေ ဖြန့်ချီလိုက်သည်။
ယနေ့ကျရောက်သည့် (၆၄) နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့တွင် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) က ဦးဆောင် ၍ “အမှောင်လွှမ်းစေသော တပ်မတော်မှ ဂုဏ်ပြုထိုက်သော တပ်မတော်သို့” အမည်ရှိ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း ခွေ ဖြန့်ချီသည့်အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီက ကျင်းပခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းစဉ်ကာလက အစဉ်လာကောင်းသည့်တပ်မတော်သည် ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် လူထုနှင့်သွေဖီသည့် လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ရှိသွားသည့်အတွက် အထက်ပါ ခေါင်းစဉ် ကို ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု အမျိုးသမီး များအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)၏ အတွင်းရေးမှူး(၁) ဒေါ်တင်တင်နွယ်က ယခုလိုပြောသည်။
“ဒါကြောင့် ကျမတို့ကဒီကနေ့မှာ ဒီအမှောင်လွမ်းနေတဲ့ တပ်မတော်ကနေပြီးတော့ ကျမတို့ ပြည်သူ တွေ အားကိုးဂုဏ်ယူရလောက်တဲ့ တပ်မတော်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းပြည်အပြောင်း အလဲကို ရှေ့ရှုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်သားတွေ အနေနဲ့ ပြည်သူတွေဖက်က နေပြီးတော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းအကြံပြုခြင်းကနေပြီးတော့ ဒီခေါင်းစဉ်ကို ရွေးချယ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။”
ယနေ့ဖြန့်ချီသည့် ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းခွေ၌် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အမျိုးသမီးများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု၊ အဓမ္မပြုကျင့်မှုများနှင့် ပါတ်သက်၍ မှတ်တမ်းတင်ဖော် ပြထားပြီး တပ်မတော်၏ မှားယွင်းသည့် လုပ်ရပ်များ လျော့ပါးသွားရန် ရည်ရွယ်၍ထုတ်ဝေ ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်(မြန်မာနိုင်ငံ) စာရင်းဇယားများအရ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှုများ တိုးတက်များပြားနေဆဲဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအရ လူတိုင်းအားမှတ်တမ်းကောက်ယူ၍ မရနိုင်သဖြင့် အတိအကျဖော်ပြနိုင်ရန် ခက်ခဲသည်ဟု အချက်အလက်ရှာဖွေစုဆောင်းသူ နန်းဆိုင်နောင့်က ပြောသည်။
“လူတယောက်ရဲ့ဘ၀မှာ ဆိုးဝါးတဲ့ ခါးသီးတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင် အဲတာမျိုးတွေကို မပြောချင်ကြဘူးပေ့ါနော် အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေ မတရားကျင့်ခံရ ပြီဆိုရင်လည်း သူတို့ပြောပြတဲ့ စကားတခွန်းကိုတော့ အမြဲတန်းမှတ်မိနေတယ်၊ အဲဒီ စကားကဘာလည်းဆိုတော့ ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြောရင်တဲ့ နောက်ထပ်တခါထပ်ပြီးတော့ မုဒိန်းကျင့်ခံရသလိုပဲ ခံစားရတယ်တဲ့။”
အခမ်းအနား၌ပြသသည့် မှတ်တမ်းဗွီဒီယိုပါ အချက်အလက်များနှင့် ပါတ်သက်၍ အခမ်းအနား သို့တက်ရောက် လာသည့် အမျိုးသမီးတဦး၏ ရင်တွင်းခံစားချက်ကို မေးမြန်းခဲ့ရာ သူမက ယခုလို ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့သည်။
“ဒါတောင်မှ အင်တာဗျူးက နည်းနည်းပဲပါတယ် ကျမတို့ကြည့်တာ၊ ဒီထက် လက်တွေ့မှာ တကယ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေထဲမှာဆို အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လောက်ထိရှိ နေမယ်ဆိုတာ ကျမမှန်းကြည့်ရင်းနဲ့ သူတို့အတွက်ဝမ်းနည်းမိတယ်၊ တဆက်တည်းမှာပဲ ဒီဟာကိုပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေ၊ ကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေကိုလည်း ခုနကခွေထဲက ပြောသွားတဲ့ ညီမတစ်ယောက်လိုပဲ တတ်နိုင်ရင် ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကို ထိုက်တန်တဲ့ အပြစ်ဒဏ်ပေး စေချင်တာပေ့ါ။”
စစ်အစိုးရ၏ ယခုကဲ့သို့ အမျိုးသမီးများအပေါ်ကျူးလွန်မှုများအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်၏ နှစ်ပါတ်လည်အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသော်လည်း စစ်အစိုးရက ငြင်းဆိုထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများသည် မမွေးခင်ကတည်းက အခွင့်အရေးအပြည့်အ၀ ရနေပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဟု CEDAW ကော်မတီသို့ စစ်အစိုးရမှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
CEDAW ခေါ် အမျိုးသမီးများအပေါ် ခွဲခြားမှုများအားလုံးပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူ ညီချက်စာချုပ်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံက လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်။
Posted by yahutha at 2:57 AM0comments
UN Special Rapporteur on Human Rights in Burma (VOA Burmese)
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံနေရသူ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် အိုဟေးလ် ကင်တာနား(Tomas Ojea Quintana) က မြန်မာစစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မတ်လ ၁၈ရက်နေ့က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ (Switzerland) ဂျနီဗာ (Geneva) မြို့  ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရင်း မစ္စတာ ကင်တားနား အခုလို တိုက်တွန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Inareport to be presented to the U.N. Human Rights Council in Geneva, UN special rapporteur on human rights in Burma Tomas Ojea Quintana urged the military junta to release all political prisoners.
Global Campaign for Free Political Prisoners (VOA Burmese)
Burmese democracy groups startaglobal campaign for freedom of political prisoners in Burma. Thailand based Assistance Association for Political Prisoners (Burma) has organizedaglobal signature ...
Today From NLD Tw23
Publish at Scribd or explore others: Magazines Marketing communication mlm
Posted by yahutha at 3:40 PM0comments
မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၂) သတင်းစဉ်
Publish at Scribd or explore others: 2008 women
Posted by yahutha at 3:22 PM0comments
Posted by yahutha at 4:04 AM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိင်ငံရေးအကျဉ်းသား များအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရန် ဂျပန်လူမျိုးများနှင့် နိုင်ငံခြားသားများထံမှ လက်မှတ်ကောက်ခံစုဆောင်း
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေသည့် သူရဦးတင်ဦးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များ၊ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်နအဖအကျဉ်းထောင်များအတွင်း၌မတရားဖမ်းဆီးခြင်းခံနေရသည့်ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် ၈၈မျီုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် NLD(LA)JB မှ ဦးဆောင်၍ ဂျပန်လူမျီုးများနှင့် နိုင်ငံခြားသားများထံမှ လက်မှတ်ကောက်ခံစုဆောင်းခြင်း လှုပ်ရှားမှုအား ဒီကနေ့(၂၀-၀၃-၂၀၀၉)နေ့လည်၁နာရီမှ ညနေ ၄နာရီအထိ ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ ရှင်ဂျုကုဘူတာ တောင်ဘက်ထွက်ပေါက်ရှေ့တွင်ကောက်ခံခဲ့ရာ လက်မှတ်ပေါင်း၃၀၀ ခန့်ရရှိခဲ့ပါသည်။
ဓါတ်ပုံ- ကိုထွဏ်းမြင့် သတင်း-NLD(LA)JB လူငယ်ဌာန
ဒီနေ့ ၂၀၊၃၊၂၀၀၉ ကြေးမုံ နှင့် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ
Publish at Scribd or explore others: Uncategorizable-Unca Technology
U.S. Secretary of State Hilary Clinton states that Daw Aung San Suu Kyi is the unyielding hope of Burma in her speech at the State Department Women of Courage Awards ceremony that honors the woman ...
Burmese in South Korea campaign for freedom of political prisoners
jp con rw23
jp con rw23 tw23tinwin
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအကြို အစုအဖွဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ရေး ကုလကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆို
Tomas tw23 tw23tinwin
Posted by yahutha at 2:45 AM0comments
Posted by yahutha at 2:39 AM0comments
မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးနေ့ NLD(LA)KOREA Branch မှဦးဆောင် ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ
Today News in Korea_2009 March 15_
Posted by yahutha at 2:16 AM0comments
W day tw23
Posted by yahutha at 3:32 PM0comments
စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိုဖုန်းမော်ကျဆုံးခြင်း (၂၁)နှစ်ပြည့်။ (၂၀)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးနေ့ ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ(Tokyo-Japan in MINAMI GOTANDA ပန်းခြံ)
21st Burma HumanRights Day held in tokyo-japan 13-3-2009. Honor to phone maw and all who lost their lives & humanrights in myanmar(burma).
Posted by yahutha at 6:45 PM0comments
"အောင်ပွဲဆင်ဖို့ ထောင်ထဲဝင်စို့" ပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲခေါ်၂၀၀၉ သင်္ကြန်သံချပ်များ
Posted by yahutha at 3:23 PM0comments
Posted by yahutha at 3:29 AM0comments
ဟံသာဝတီသတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင် မှ ဂျပန်ရောက်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများထံ ပြောကြားချက်
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (အထက်ဗမာပြည် - ယာယီ်) ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်
ဒီနေ့ ၁၄၊၃၊၂၀၀၉ ကြေးမုံ နှင့် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ
March 132009 New
13th March 2009 _BPPU Statement
Exile groups urge junta to release political prisoners
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဌ သူရဦးတင်ဦးနှင့် အတွင်းရေးမှူး ဟံသာဝတီသတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်တို့၏ မွေးနေ့ဆုတောင်ပွဲအခမ်းအနား
ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုရှိ မြန်မာစစ်အခွန်ရုံရှေ့တွင် NLD(LA)JB,AAPP,LDP,DPNSစသည့်အဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံတို့ဖြင့်ပူးပေါင်း၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဌ သူရဦးတင်ဦး(၈၂)နှစ် နှင့် အတွင်းရေးမှူး ဟံသာဝတီသတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်(၇၉)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဆုတောင်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အခမ်းအနားသို့ ဂျပန်ရောက်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ ၁၀၀ကျော်ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင်၈-၃-၂၀၀၉ ရက်နေ့တုန်းကIKEBUKURO,Toshimaku-Kanko Plaza(7F)တွင် NLD(LA)JBမှကျင်းပပြုလုပ်သော သူရဦးတင်ဦးနှင့် အတွင်းရေးမှူး ဟံသာဝတီသတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်တို့၏ မွေးနေ့ဆုတောင်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ရာ ကဗျာများရွတ်ဆိုချင်း၊အကျဉ်းကျဘ၀မှအမြန်လွတ်မြောက်ရန်နှင့် သက်တော်ရာကျော်ရှည်စေရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပြီးအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
Posted by yahutha at 3:34 PM0comments
သွေးစွန်းသော တနင်္ဂနွေနေ့ (သို့) ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့ ။
March News Tw23
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ဒု-ဥက္ကဌ သူရဦးတင်ဦး နှင့် အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းတင် တို့ ၏ မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ။
U Tin Oo and U Win Tin BD PA_12 March 2009
Publish at Scribd or explore others: 2008 guitar
Birthday for U Win Tin & Thura U Tin Oo (Tokyo Japan)1988
NLD Women's Statement for International Women Day.
Posted by yahutha at 3:45 PM0comments
February, 2009 Final
Publish at Scribd or explore others: Newsletters Government 2008 president
Posted by yahutha at 8:47 AM0comments
Posted by yahutha at 8:45 AM0comments
Posted by yahutha at 8:43 AM0comments
March 82009 News
(၉၈) ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့(မတ်လ ၈ ရက်) ။
Publish at Scribd or explore others: Academic Work Legal international youth
Posted by yahutha at 8:33 AM0comments